🥇 ▷ Mario Kart wuxuu ku yimid run markabkan markabka dushiisa ✅
Mario Kart wuxuu ku yimid run markabkan markabka dushiisa
mid ka 2
Waxaa suuragal ah dhiirrigelin heer la yiraahdo Daisy Cruiser of Mario Kart: Double Dash!, Khadka Noorwiijiyada ee Noorway waxaay bilaabeen in ay dhisaan tareeno kor saaran tareenka mid ka mid ah maraakiibtiisa waa weyn. Iyadoo ujeedadu tahay soo jiidashada dadka dalxiisayaasha ah ee doorbida inay ku ordaan xawaare buuxa oo aan ka ahayn daawashada qorraxda qorrax dhaca, shirkaddu waxay ku dhowaaqaysaa inay baabtiiso weel weyn oo badda ku yaal oo bixin doona wixii u eg orodka ugu orodka badan ee aan waligeen ogaanno.
Shirkadda ‘Encore’ ayaa loo qorsheeyay inay hesho rakaabkeeda ugu horreeya bisha Noofembar 2019, markaasoo ay heli karaan laba-labaatanka karting wareeg iyo dherer aad u gaaban oo ah 1,150 fiin (350 mitir), sida laga soo xigtay Gawaarida iyo Wadaha. Sida ku xusan daabacaadda, qaabeynta ayaa weyn oo ku filan in lagu dego 10 darawal oo ku shaqeeya baabuurta korantada.
Waxaan ka shakisan nahay in shirkaddu dooratay baytariyada dib loo isticmaali karo oo keliya sababtuna maaha, laakiin sababta oo ah qaabeynta noocan oo kale ah waxay dhalisaa yareyn yar yar yahay waxayna ka madax bannaan tahay gaasaska guban kara, marka lagu daro inay gabi ahaanba ka madax bannaan tahay dayactirka, kana duwan mashiinka gubashada gudaha. Afar qaybood oo ka mid ah jidka tareenka ayaa ku yaal cidhifka biyaha, in kasta oo darbiyada dayactirka ahi ay ka hor tagi doonaan in ay ku xayiran yihiin xeebta Mario Kart.
Dharka, qolofka qoolleyda iyo diirka mooska kuma jiraan. Magdhow ahaan, Norwegian Cruise Line waxay sharraxday in daawadayaasha ay siin karaan orodkooda ay jecel yihiin kor u qaad iyaga oo ku calaamadsanaya nooc leysarka. Taasi waa muuqaal aan xitaa Mario Kart uusan wali hirgelin, laakiin waxaan ku faraxsanaan laheyn inaan ku aragno nooca xiga ee ciyaarta oo ah abaalmarinta helitaanka qolof buluug ah.
Encore dhab ahaantii waxay leedahay qol loogu talagay taraafikada go-kart. Waa dooni 1,100-fiit (335-mitir) ah, weyna ku filan in lagu qaado 4,000 oo qof, waana tiro ka badan tirada dadka ku nool magaalo kasta oo miyi ah. Ka sokow tartanka orodka, waxay bixisaa oo ay ka mid tahay shaybaadhka “laser tag” (oo sidoo kale loo yaqaanno “electronic paintball”), baarkin biyo, dhowr barkado dabaal, marka lagu daro adeegyadda aad filayso inaad ka hesho doonnida, sida sida cashuur iyo dalxiis.
Waxaa lagu soo ururiyay dalka Jarmalka, markabka ayaa markabkiisii ​​ugu horreeyay bishii Ogosto 2019, sidaa darteed hadda waxaa maraya tijaabooyin ugu dambeeya waxaana loo qorsheeyay inuu markabkiisa toddobadda maalmood ah ugu horreeyo bisha November. Laga soo bilaabo Miami, Florida, waxay dalxiis ku tagi doontaa Bariga Caribbean-ka. Sanadka 2020 waxaa lagu dari doonaa wadooyin kale, oo ay kujirto mid sahmiya biyaha Alaska.
Ku orodka kart korantada ee badda furan waa qaali sidii aad filaysay. Gaari iyo Wade ayaa sheegay in tartan sideed daqiiqo ah uu ku kacayo $ 15 doollar iyo hal todobaad oo tikid ah ayaa lagu qiimeeyaa qiyaastii $ 200. Taasi waa mid dheeri ah qiimaha doonida, dabcan.